‘सुनिताको नामबाट चिनिदा गर्व लाग्छ’ |
‘सुनिताको नामबाट चिनिदा गर्व लाग्छ’
प्रकाशित मिति :2017-08-11 13:58:00
भनिन्छ हरेक श्रीमानको सफलतामा श्रीमतीको हात हुन्छ, श्रीमतीको सफलतामा पनि श्रीमानको त्यत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । यस्तै उदाहरण बनेका छन् चेलिबेटी (मानव) बेचविखन विरुद्धकी अभियान्त एवम् शक्ति समूहकी संस्थापक सुनिता दनुवारको दम्पती । १४ वर्षको उमेरमा भारतमा बेचिनुभएकी सुनिता नेपाल फर्किएसगैँ यसै अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार समेत पाइसक्नुभएकी सुनिताको हरेक पाइलामा श्रीमानको साथ र सहयोग छ । उनै सहयोगी श्रीमान नृपसगँ महिला खबर संवाददाता सन्दिप विकले गर्नुभएको कुराकानी ।
 १४ बर्षकै उमेरमा बेचिन पुगेकी सुनिता जी स्वंमम् मानव वेचविखन विरुद्धको अभियानमा सक्रिय भै, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय पुरस्कार पाइसक्नुभएको छ, उच्चशिक्षा अध्ययन र पुस्तक पनि लेखिसक्नुभएको छ । श्रीमतीको प्रगति देख्दा कस्तो लाग्छ ?
आफ्नो श्रीमतीको प्रगतिमा कस्लाई खुसी लाग्दैन र । मेरो श्रीमतीको प्रगतिमा धेरै खुसी छु । उनीप्रति गर्व गर्छु । अझ धेरै प्रगति गरुन् भन्ने चाहन्छु । अझ ठूला – ठूला पुरस्कार जितुन् भन्ने चाहना छ । उसको मेहनत खेर गएको छैन । हरेक तबरबाट मैले उनलाई साथ दिदैँ आएको छु ।
 तपाई उदयपुरको सुनिता जी दैलेखको, भेट कसरी भयो ?
जब उनीहरु वि.स २०५२ सालमा भारतबाट पुर्नस्थापित भएर नेपाल आए । त्यसबेला ओरेक भन्ने संस्थामा आश्रय लिइरहेका थिए । त्यतिबेला म पनि काठमाडौं मै मंगलबजारमा काम गर्थे । मेरो दिदी उदयपुरको ओरेकको अफिसका काम गर्नेहुँदा म ओरेकको अफिसमा प्रायः गइरहन्थ्ये ।
एकपल्ट मैले झ्वाट्ट सुनितालाई देखे । सुनिता उद्दार गरेर आएकी हुन् भन्ने मलाई थाहा थियो । पहिलो नजरमै उनलाई मन पराए । तर मन पराउँछु भनेर भन्न सकिन् । त्यहि सिलसिलामा सुनिता ६ महिनाको तालिम दिन उदयपुर गएकी थिइन् । म पनि उदयपुरमै थिए ।
सुनिता मेरो दिदीको साथी । उदयपुर हुँदा उनी मेरो घर जाने-आउने गर्थिन । मैले त काठमाडौंबाटै मन पराइसकेको थिए । झन् उदयपुरमा हुँदा मलाई प्लस प्वाइन्ट भयो । त्यहाँ हुँदापनि मुखले भन्न सकिन् । अनि पत्र पठाए ।
चिठी पत्रबाटै प्रेम भयो । तर परिवारलाई सुइको दिएनौं । म दिदीलाई सुनितालाई पनि घरमा ल्याउनुभन्थे । दिदीले लिएर आउनुहुन्थ्यो । घरमा दुःख, सुःख गरेर पकाएको जे छ, हामी त्यही खान्थ्यौँ । त्यस बीचमा हाम्रो बारेमा कसैले शंका गरेनन् । पछि एक्कासी विहे गर्दा उहाँहरु झल्यास्स हुनुभयो । विहे गर्दा म २१ वर्षको थिए । सुनिता र मेरो उमेर सँगसँगै जस्तो छ ।
सुनिताले शुरुमै भनेकी थिइन् ‘म बेचिएर आएको केटि, म सँग विवाह गर्दा समाजले तपाईलाई अर्कै किसिमले सोच्ला ।’ तर सवैभन्दा ठूलो कुरा मन रहेछ । मैले उनलाई मन देखि नै मन पराएको थिए । मेरै जिद्दीले हाम्रो विवाह भयो । हामीले चोखो माया गरेका थियौं । हाम्रो मन मिल्यो । विवाह पनि भयो ।
 त्यसबेला समाजले बेचिएकी महिला भनेर राम्रो नजरले हेर्ने थिएनन्, अझैपनि सोचाई परिवर्तन भएको छैन्, तर तपाईलाई उहाँसगै विवाह गर्न के कुराले प्रेरित गर्‍यो ?
समाजले धेरै लान्छना लगाए । कन्या केटाले बेचविखनमा परेकी केटी विहे गर्‍यो भनेर । फेरि हाम्रो अन्तरजातीय
विहे । कतिले आफ्नै जातको केटी विहे गर्नुको सट्टा साँवासँगै व्याज नै ल्यायो पनि भने । मलाई झन् इख जाग्यो । मेरो श्रीमतीले यो समाजमा केही गरेर देखाओस् भन्ने लाग्न थाल्यो । त्यो अहिले पूरा भएको छ ।
वि.स २०५२ सालतिर सुनिता लगायत अन्य बेचिएका, रोग लागेका युवतीहरु नेपाल फर्कदैछन् भनेर फर्किनुपूर्व नै पत्रपत्रिकामा व्यापक रुपमा छापिएको थियो । मैले पनि पढेको थिए । काठमाडौं फर्किएपछि झन् प्रत्यक्ष रुपमा सुनितालाई भेटे । उनको बारेमा पहिले नै सवै कुरा थाहा भएकाले झन् उनलाई साथ दिन पाए राम्रो होला र मैले पनि मन पराएको मान्छेको साथ पाउनेथिए जस्तो लाग्यो । मलाई लाग्थ्यो दुःखमा परेको मान्छेले धेरै बुझ्ने र गर्न सक्ने हुन्छन् । सुनिता त्यस्तै छिन् ।
२०५४ सालमा हाम्रो प्रेम विवाह भयो । विवाहपछि एक वर्षसम्म हामी घरपनि गएनौं । सुनिताको नागरिकता बनाउने उदयपुर जाँदा पनि अन्तै बस्यौं । एक्कासी सुनितालाई घर लगे भने घरका मान्छेले केही भन्दिएलान र उनको मनमा झन पिडा थपिएला भन्ने चिन्ता मलाई थियो । म उनलाई कतै पनि अपमानित भएको देख्न सक्दैन्थे ।
 विवाह भएको दुई दशक भैसक्यो, यो बीचमा सम्बन्धमा कुनै खटपट आयो कि आएन ?
सहयात्रा लामै भैँसक्यो । कहिलेकाही भनाभन त भइन्छ । तर हामीबीचमा झैँ–झैगडा भनेर त्यस्तो ठूलो केही भएको छैन । कहिलेकाही भनाभन हुँदा झन माया बस्दो रहेछ । हल्का भनाभन हुन्छ, त्यो भनाभन मायामा परिणत हुन्छ । तछाड मछाड गरेर ठूलो झगडा अहिलेसम्म भएको छैन ।
 सुनिता जीको अहिले लोभ लाग्दो प्रगति छ, यो सफलतामा तपाईको भूमिका कस्तो छ ?
सुनिता नेपाल फर्किएपछि केही गरौं भन्ने सोच राखेकी थिइन् । मैले पनि समाजमा केही गरेर देखाऊ, भनेर हौसला दिइरहे ।
पहिले कसैले ६ हजार रुपैँया तलब खान्छ भन्ने सुनेपनि वाह कति धेरै तलब भन्थे । मेरो श्रीमतीको कहिले होला, त्यति धेरै तलब भन्थे । यति तलब खाने मेरो श्रीमती कहिले बन्छे भन्ने लाग्थ्यो । अर्को सुनितालाई पढ्ने इन्छा धेरै थियो । तर बच्चा भएकै कारण पढ्न सकेकी थिइनन् । उनको सफलताका लागि मैले हरेक चिजमा अगाडि बढ भनेर साथ दिए ।
हरेक कार्यक्रमहरुमा सहभागी होउन भन्ने सोच थियो । छोरी तीन महिना हुँदा समेत मैले छोरीलाई आफैले सम्हालेर उनलाई भैरहवा पठाए । त्यो बेला उनी तीन दिन कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किएकी थिइन् । आमाको काख छोड्दा छोरी साह्रै रुन्थि । उनलाई पनि श्रीमानको साथ छ भन्ने लाग्यो होला । हौसला बढाउँदै गइन् । मलै उनको सफलतामा साथ दिदैँ गए ।
 उहाँले पढाइलाई कसरी बढाउनुभयो ?
मैले पनि विद्यालय शिक्षा भन्दा धेरै पढ्न सकिन् । सुनितालाई पढ्ने साह्रै रहर । हाम्रो विवाहपछि हामी दुवै ओरेकको कर्मचारी भएर जनकपुर गएका थियौं । जनकपुरमा रहँदा उदयपुरको एक जना चिनेको हेडमास्टरसँग भेट भयो । भेटमा उहाँलाई मैले सुुनितालाई पढ्नका लागि सर्टिफिकेट बनाउन आग्रह गरे । उहाँले छ कक्षा पासको सर्टिफिकेट बनाइदिनुभयो ।
एक वर्षपछि हामी त्यहाँबाट काठमाडौं आयौं । छोरीपनि दुई वर्षकी भइसकेकी थिइन् । सुनितालाई सात दोवाटो स्कूलमा सात कक्षामा भर्ना गराए । आठसम्म सातदोवाटोको प्रोरणा महिला विद्यालयमा पढिन् । त्यसपछि ९ सम्म ज्ञानज्योति महिला विद्यालय मित्रपार्क र १० रौतहटबाट पढिन् र त्यहिबाट २०६६ मा एसएलसी पास गरिन् । अहिले व्याचलर पढ्दै छिन् ।
 आफूलाई श्रीमतीको नामबाट चिनिदा कस्तो लाग्छ ?
श्रीमतीको नामबाट चिनिन् पाउँदा म आफूलाई गर्व महशुस गर्छु । किनकी सुनितालाई विवाह गर्दा मलाई समाजले धेरै कुरा भनेका थिए । जुन मान्छेले मलाई घृणाको तरिकाले हेर्थे, ती मान्छेको मुखमा अहिले बुझो लागेको छ । मलाई समाजमा बेचविखनमा परेकी केटीसँग विहे गरेको भनेर धेरैले नराम्रोसँग भनेका थिए ।
त्यो बेला मैले सोचेको थिए, तिमिहरुलाई एक दिन देखाउने दिन पक्कै आउँछ भनेर । त्यो चाहाना पुरा भएको छ । अहिले तीनै मान्छेहरु नृपले राम्रो केटी विहे गरेछ । वाह, वाह भन्ने पनि छन् ।
पहिले घृणा गर्ने गाउँलेहरु अहिले मलाई भन्दा सुनितालाई बढि माया गर्छन् । आदार– सत्कार गर्छन् । यो भन्दा खुशीको कुरा के हुन सक्छ र ।
सुनिता जी राम्री पनि हुनुहुन्छ, धेरैजसो घर बाहिरै हिँड्नुहुन्छ, विदेशपनि जानुहुन्छ, कतिले मन पराएका होलान्, फोन म्यासेज आउँछन् होला, कति शंका गर्नुहुन्छ ?
हा, हा शंका गर्नु मान्छेको स्वभाव नै हो । श्रीमतीलाई पनि हुन्छ । फेसवुकमा गफ गरिराखेको छ भने कहिलेकाही किन बोलिराखेको भन्ने पनि हुन्छ । शंका गर्नु एउटा राम्रो त राम्रै हो । तर यतिसम्म शंका गर्नुपर्छ कि त्यो शंकाले घरपरिवार नविग्रियोस् । घरपरिवार राम्रो बनोस् । शंकालाई राम्रो तरिकाले बुझ्यो भने परिवार राम्रो हुन्छ ।
शंका शंकैमा त यस्तो, ऊ यस्तो भन्न थाल्यो भने घरपरिवार नै विग्रिन्छ । नाता पनि रहदैँन । अन्त्यमा सम्वन्ध विच्छेद हुने सम्मको स्थिती आउन सक्छ । त्यसैले शंका गर्नुपर्छ तर सिमित ठाउँमा । शंकालाई माया सँगसगैँ पनि लैजानुपर्छ । माया र शंका सँगसगैँ भयो भने त्यति असर पर्दैन ।
 विगतमा श्रीमतीले घर समाल्ने श्रीमान बाहिर हेर्ने गर्थे । अहिले अवस्था फेरिएको छ । तपाई घर समाल्दै हुनुहुन्छ श्रीमती बाहिरा । कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
मेरो पनि आफ्नै विजनेश छ, व्यापार गर्छु । तर उनको जिम्मेवारी ठूलो छ । प्रायः उनी घर बाहिरै अफिस, कार्यक्रममा नै व्यस्ता हुने हुँदा घर व्यवहार मैले नै धानी राखेको छु । घरमा नुन सकियो भनेपनि सुनितालाई थाहा हुँदैन । सबै मैले नै सम्हाली राखेको छु । कुन पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन । घरमा भएको बेलामा मासु किनेर पकाइदिन्छिन् । तर हामीबीचमा समझदारी छ ।
 तपाई र तपाईको श्रीमतीको दैनिकी कसरी शुरु हुन्छ ? के के गर्नुहुन्छ ?
मलाई पाँच बजे नै निन्द्राले छाेड्छ । हातमुख धोएर, चियानास्ता गरि विहानै छोरीलाई कलेज पुर्याउन जान्छु । फर्किएपछि पसल खोल्छु । दिउँसोको खाना होटेलमै खान्छु ।
उनी पनि ६ बजे उठ्छिन् । कहिले त विहानैबाट मिटिङ सुरु हुन्छ । उनी हिँडिसकेकी हुन्छिन् । घरमा हुँदा खासै काम त हुँदैन । घर भएको बेला घरको सरसफाई गर्ने, खाना पकाउँछिन् ।
 कहिलेकाही श्रीमतीसँग घम्न जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन ?
लाग्छ नि । तर उनको फुर्सद हुँदैन । चन्द्रागिरी जाने भनेको एक वर्ष भयो तर जाने मौका मिलेको छैन । छोरी रिसाएर चौपट छ । जाने प्लान बनाएका हुन्छौ । फेरि सुनिता व्यस्त हुन्छिन् । उनको सेडुल पहिलै बनि सकेको हुँदोरहेछ ।
कहिलेकाही विदेशबाट फर्किदा एयरपोर्टबाट हामी सुर्केस बोकेर आउँछौ । उनी उतैबाट कार्यक्रममा गएको हुन्छिन् । कहिले यो दिन घुम्न जाऊ भन्दा मेरो त कार्यक्रम प्याक छ भन्छिन् । अनि के जाने ।
सुनिता जी यो अवस्थामा आइपुग्न तपाईको साथ छ । अझै केही सपना छन् कि ?
श्रीमतीलाई यहाँसम्म ल्याउन मैले धेरै हौसाला दिए । यदापि उनको आफ्नै मेहनत र लगाव पनि हो । उनको पढ्ने चाहना छ । अब पिएचडि गरेर नामको अगाडि डाक्टर लेखोस् भन्न चाहन्छु । अर्को बेचविखनमा परेकी एउटी महिला सभासद् बन्नोस् भन्ने चाहना छ । जिल्लाका मान्छेहरुले पनि सुनितालाई राजनीतिमा आए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् ।
श्रीमतीको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष के लाग्छ ?
सुनिता झुटो कुरा बोल्दिनन् । यदि उनले झुटो कुरा बोलेको भए हाम्रो सम्बन्ध नै टुट्थ्यो होला । हाम्रो विवाह हुनुभन्दा पहिले पनि उनले म यस्तो ठाउँमा गएर आएको हो भनेर ढाट्न सक्थिन होला । ढाटिनन् । सबै मसँग यथार्थ भनिन् । उनीसगँ विहे गर्दा धेरै समस्या पर्न सक्छ त्यो सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पहिल्यै भनेकी थिइन् । अहिलेपनि ऊ सत्य कुरा बोल्छिन् । झुटो कहिल्यै बोल्दिनन् । लिडरसिप राम्रो छ उनको । त्यो काम गर्छु भनेपछि गरेर छाड्छिन् । नराम्रो पक्ष खासै देखेको छैन ।
एउटा श्रीमतीको सफलताका लागि श्रीमानले के के कुरामा सहयोग गर्नुपर्दोरहेछ ?
श्रीमान श्रीमती दुवैको सफलताका लागि एकले अर्कालाई राम्रो भूमिका निभाउनै पर्छ । जस्तो श्रीमती कुनै कार्यक्रममा जाँदैछिन् भने त्यहाँ नजाऊ भनेर श्रीमानले रोक्नुहुँदैन । राम्रो काममा दुवैले हौसला दिनुपर्छ । विश्वास सवैभन्दा ठूलो कुरा हो । एकले अर्काको कुरा सुन्नुपर्छ । बुझ्नुपर्छ ।